Abaphulaphuli vs abahlali: Ngaba uyawazi umahluko? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 9, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sibe nencoko emangalisayo noAllison Aldridge-Saur weSizwe saseChickasaw ngolwe-Sihlanu kwaye ndingakukhuthaza ukuba umamele. UAllison usebenze kwiprojekthi enomdla njengenxalenye yesibonelelo seDigital Vision, ebhala uthotho kuyo Izifundo zaseMelika zaseMelika zokwakha uLuntu.
Kwinxalenye yesibini yochungechunge lwakhe, uAllison uxoxa Abaphulaphuli xa kuthelekiswa nabahlali. Oku kwandibetha njengenye yezona zinto zibalulekileyo kuthotho lonke. Andiqinisekanga ukuba abathengisi abaninzi bayaqonda ukuba kukho umahluko okwahlukileyo phakathi kwabaphulaphuli noluntu. Nalapha eMartech, senza umsebenzi omnandi wokwakha abaphulaphuli abaninzi ... kodwa asikhange siqulunqe isicwangciso sokwakha uluntu.
UAllison uxoxa ngomahluko phakathi ukwakha abaphulaphuli bakho -Umamela, uthethathethwano, umxholo ofanelekileyo, amanqaku okunyaniseka, umdlalo ophakamileyo, ukunika izipho uqoqosho, ukunikezela kunye nokuhambelana kwemiyalezo. Abanye banokuthi ezi zizicwangciso zokwakha uluntu… kodwa kukho umbuzo omnye oza kuphendula ukuba unayo okanye enye. Ngaba uluntu luza kuqhubeka ngaphandle kwakho, ngaphandle komxholo wakho, ngaphandle kwenkuthazo, okanye ngaphandle kwexabiso elipheleleyo obazisayo? Ukuba impendulo ngu-HAYI (ekunokwenzeka ukuba ikho), unabaphulaphuli.
Ukwakha indawo ohlala kuyo sisicwangciso esahluke kakhulu. Izixhobo zokwakha abahlali zibandakanya ukubizwa kweqela, iminyhadala kunye nabantu, usebenzisa ijogon yangaphakathi, ukuba neempawu zakho, ukuphuhlisa kwabelwana ukubalisa, ukuba neenkqubo zexabiso, amasiko, ukwakha imvumelwano kunye nokudibanisa izixhobo. Uluntu luhlala ngaphaya kwenkokeli, iqonga, okanye imveliso (cinga iTrekkies). Ngapha koko, u-Allison wathetha into engakholelekiyo xa sasithetha naye… igqwetha loshicilelo ekuhlaleni lungahlala ixesha elide kuneqela lezentengiso ngokwalo!
Oko akutsho ukuthi ukuba nabaphulaphuli nje yinto embi… sinabaphulaphuli ababulela kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba ibhlog yanyamalala ngomso, ndiyoyika abaphulaphuli, nabo! Ukuba sinethemba lokwakha umbono ongapheliyo, siya kusebenza ukuphuhlisa uluntu.
Umzekelo omkhulu woku kuthelekisa olunye uphononongo lwemveliso xa kuthelekiswa Uluhlu lukaAngie (umxhasi wethu). Iqela kuLuhlu luka-Angie alunyanzeli ukuphononongwa, livumele uphononongo olungaziwayo ... kwaye benza umsebenzi obalaseleyo wokulamla iingxelo phakathi kwamashishini kunye nabathengi ukuqinisekisa ukuba omabini amacala aphathwa ngokufanelekileyo. Iziphumo luluntu oluzinikeleyo ngobuhlanya olwabelana ngamakhulu kuphononongo olunzulu lwamashishini abasebenzisana nawo.
Xa ndatyikitya ngokwam le nkonzo, ndacinga ukuba ndiza kujonga into enje ngeYelp apho ishishini lidwelisiweyo kwaye bekukho uphononongo lweshumi elinambini ngesivakalisi okanye ezibini ezantsi kwazo. Endaweni yokuba, uphando olucekeceke lweplumbers kwingingqi yam lwachonga amakhulu abantu abatywini ngamawaka ovavanyo olunzulu. Ndaye ndakwazi nokuyinciphisa iye kumbhobho ngemilinganiselo ephezulu yofakelo lwezifudumezi manzi. Isiphumo kukuba ndafumana isifudumezi samanzi ngexabiso elikhulu kwaye andizange ndibenexhala lokuba ndiza kukhutshwa na okanye hayi. Kwintengiselwano enye, ndagcina iindleko zonyaka wonke zobulungu.
Ukuba, ngesizathu esithile esinzima, uLuhlu luka-Angie luthathe isigqibo sokuvala iingcango zalo, andithandabuzi ukuba uluntu abalukhuphileyo luya kuqhubeka nokwenza umsebenzi omangalisayo abawenzayo ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo ukunika ingxelo ngeziphumo zeshishini. I-Yelp kunye noGoogle banokuba nabaphulaphuli abaninzi… kodwa uluhlu luka-Angie lwakha uluntu. Umahluko omkhulu.
tags: abaphulaphuliisakhiwo sabaphulaphuliintshontshoIsizwe saseChickasawumphakathiukwakha uluntuImidiya yokuncokolaamaqhinga eendaba ezentlalo
Juni 15, 2012 ngo-12: 13 PM
Ngokuqinisekileyo ndiyathemba ukuba ndakha uluntu. Ndifuna into ekhulayo nangona ndingasekho apha. Oku kuya kubonisa ukuba ndenze into efanele ukuqhubeka.
Sep 10, 2012 ngo-12:38 PM
Yinyani ke- kufuneka wenze abantu babe (okanye ngaphezulu) ukuba babe nemincili malunga noluntu lwakho njengoko unjalo. Le yindlela ehamba ngayo xa uqhuba inkampani yakho. Ukuba ndinokuba kude neofisi iveki kwaye inkampani iqhuba kakuhle ngaphandle kwam, ndiyazi ukuba ndenze into elungileyo.